WIKO VIEW 5 Plus: Nyocha, Nkọwapụta na Ọnụahịa | Gam akporosis
Oge a anyị na-ewetara gị nyocha nke ngwaọrụ anyị maara nke ọma. Anyị natara Wiko Nlele 5 Plus, nwanne nwoke nke okenye nke Wiko View 5 nke anyị nwere ike nyochaa naanị izu ole na ole gara aga. Myirịta na ntụnyere bụ nke a na-apụghị izere ezere n'etiti abụọ, mana anyị ga-anwa ilekwasị anya ma gwa gị ihe niile gbasara ya n'otu n'otu.
Ọzọkwa, anyị ga-ekwu na Wiko lekwasịrị anya n'inye onyinye a mma ngwaahịa mgbe niile na-enweghị price ịbụ ihe mgbochi. Anyị enweela ike ịnwale ngwaọrụ dịka ndị a Wiko Y61, ma ọ bụ nke na-adịbeghị anya Lelee 5, ma taa anyị nwere ngwaọrụ nke na-ewelite ọkwa otu ọkwa. Mmelite na uru n'ozuzu maka mmụba ọnụahịa na-enweghị isi.
1 Wiko View 5 Plus, ọtụtụ ihe maka obere
2 Unboxing Lee 5 gbakwunyere
3 Uche dị mkpa
4 Ihuenyo nke Wiko View 5 Plus
5 Ngwa ime ụlọ nke Wiko View 5 Plus
6 Ngalaba foto nke Wiko View 5 Plus
7 Foto ndi nwere Wiko View 5 Plus
8 AUTONOMY (na mkpụrụedemede ukwu)
9 Nkọwa, mgbakwunye na enweghị
10 Nkọwapụta tebụl Wiko View 5 Plus
11.5 Uche ederede
Wiko View 5 Plus, ọtụtụ ihe maka obere
Mgbe anyị na-achọ ọhụụ ọhụụ enwere ogige ndị anyị ga-eburu n'uche mgbe niile. N'ezie ndị a nwere ike ịgbanwe ọtụtụ dabere na mmefu ego anyị nwere maka ya. Mana dika iwu n'ozuzu, anyị chọrọ mobile nke nwere ike ịba uru niile nke oge a na-enweghị itinye nnukwu ego.
Ọnụahịa dị mkpa mgbe niile n'okwu a. Site na oge na ahụmịhe anyị enweela ike ịhụ etu obughi mgbe niile mma ngwaahịa mma na uru ka mma ruru na ọnụahịa ahụ. Na Wiko anyị ahụla ezigbo ọkwa mbata. Ma na echiche 5 Plus, ọkwa nke ịrị elu na-ebili ka etinye ya na a ihe mgbaze enwe ike ịsọ mpi na ngwaọrụ ndị ọzọ nwere ike ịmata.
Na mkpokọta okwu, ndị Wiko View 5 Plus na-ejikwa iji tụọ ndị na-ama ya aka. Nnukwu ihuenyo, nnukwu batrị, ihe nhazi dị mma na igwefoto. Ihe kpatara anyị ga-eji were ngwaọrụ a. Karịsịa mgbe anyị na-ekwu maka gịnị ị nwere ike ịzụta ya site ọnụahịa dị n'okpuru 200 euro.
Unboxing Lee 5 gbakwunyere
Oge eruola ịchọpụta ihe niile elele anya 5 Plus na-enye anyị n'ime igbe ya. Nke mbu anyi huru nke ekwentị. Ọ na-adị kọmpat na mmetụ ahụ na nha ihu ọma ya na-ahụkwa ozugbo.
Ọ bụghị ihe ijuanya, dịka ọ na-abụkarị ụkpụrụ, ọ bụ ezie na anyị nwere ihe ọzọ ndị nrụpụta ndị ọzọ "chụpụrụ" afọ gara aga, ụfọdụ ekweisi. Anyị nwere chaja «Mgbidi», na USB na-akwụ ụgwọ / data data na usoro USB Cdị C. Wiko etinyela aka na usoro a na ngwaọrụ niile.
Ma ọ dịghị ihe ọzọ anyị nwere ike pụta ìhè, naanị akwụkwọ ikike nke ngwaahịa, ụfọdụ mgbasa ozi na obere Ndenye Malite Guide. Na nke a anyị achọpụtaghị kpochapụla silicone ikpe. Ihe agbaghara ebe ọ nwere ike ọ gaghị adị mfe ịchọta ngwa maka ụdị ọnụahịa a.
Uche dị mkpa
Anyị agụla ọtụtụ oge na imepụta akụrụngwa bụ nke abụọ mgbe ọ nwere ike ịweta nnukwu ọrụ. Oge, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na-emepụta, anaghị ekere òkè na tiori a na na-eburu n'uche ngalaba imewe nke smartphones ọhụrụ ha. Anyị na-ahụ otú ndị Wiko Lelee 5 ma ọ bụ Nlele 5 Plus nwere nyocha amụrụ ihe iji wee pụta n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Na ihu nke Wiko View 5 Plus anyị na-ahụ a ihuenyo na-eru diagonal nke 6.55 sentimita. Nnukwu ihuenyo IPS LCD n'ikuku ana enweta n'otutu-aka wuru ke 2.5D mechie iko na 20: 9 akụkụ ruru. Ọ pụta ìhè ihe ngwọta nke notch na oghere na ihuenyo mechie iji zoo igwefoto n'ihu.
O doro anya na azụ ya nke ngosi a bụ 5 Plus. Na-amalite site n’ihe eji wuo ya na ọdịdị ọ na-enye. Na nkwekọrịta a mma iko mmetụta na kenkowaputa mirror eku. Ihe a na-akpọ gradient mmetụta sitere n'ike mmụọ nsọ, dị ka onye na-emepụta ya si kwuo, site na ebube nke agba nke okike. Ọnụ ọnụ natara agba "Aurora Blue”Anyị chọpụtakwara ụdị agba "Iceland ọlaọcha".
Ya na azụ nwere otu n’ime ihe ndị kacha mkpa nke Wiko View 5 Plus, igwefoto ya. N'elu aka ekpe bụ ihe na-adọrọ mmasị foto igwefoto modul na anya m anọ tinyere ikanam flash. Nduzi nwere ọgụgụ isi yana nke mara mma nke nwere oghere 4 anya maka nke anyị ga-agwa gị n'uju karịa.
Jiri uru nke onyinye nke Wiko Nlele 5 Plusna Amazon
Ọzọkwa ebe anyị hụrụ otu ihe dị mkpa maka nchekwa, mkpisiaka agụ. Ọ dị na mpaghara etiti ma jikọta ya na ngwaọrụ nwere otu ihe na otu agba. N'elu anyị na-achọta naanị Ogwe njikọ njiko ọdịyo nke 3.5. Na ala anyị nwere igwe okwu, nke Nchaji njikọ na usoro USB Type-C, na naanị ọkà okwu.
Na-ele anya n'ime aka ekpe anyị na-ahụ naanị oghere na tree maka SIM na Micro SD kaadị ebe nchekwa. Na na Aka nri bụ ahụ bọtịnụ anụ ahụ. Bọtịnụ jikwaa olu, bọtịnụ nwere ike ịhazi iji tinye ọrụ kpọmkwem, yana Mkpọchi ma gbanye / gbanyụọ.
Ihuenyo nke Wiko View 5 Plus
Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere iji nọgide na-atụnyere Ele 5 Plus na “nkịtị” Ele 5. Ihuenyo ahụ na-aga n'ihu ịgụ dị ka otu n'ime akụkụ kachasị mkpa mgbe ị na-eche maka ịzụrụ otu ma ọ bụ ekwentị ndị ọzọ. Na nke a, ma ngwaọrụ ịkọrọ otu ihuenyo ya mere njirimara ndị ahụ bụ otu.
Anyị chọtara otu ihuenyo emesapụ aka na nha ruru 6,55 sentimita. Nnukwu ihuenyo nke ekele maka njikọta zuru oke na-eme ka ngwaọrụ ahụ pụta ìhè maka nha ya. Ọ bụ ezie na anyị ga-ekweta na ọbụlagodi ole na ole ntakiri osisi, ọ na-amịpụta ntakịrị toro ogologo karịa ọtụtụ.
La ihuenyo bụ nke ụdị 20: 9 akụkụ ruru IPS LCD nke na - eme Wiko View 5 ka ọ bụrụ ngwaọrụ zuru oke iji nwee ọ contentụ na ọdịnaya multimedia. Uzo nke mkpebi, isi, abughi otu n’ime ikike ya na o nwere 720 x 1600 px na HD +, ma ahụmịhe onye ọrụ ahụ dị mma karịa ka a tụrụ anya ya. Ọ nwere 268 ppi njupụta na a nwuo nke ahụ ruru 450 nits.
Anyị atụleworị ya na nyocha nke Ele 5, azịza ejiri zoo igwefoto n'ihu anyị hụrụ n'anya. Oghere dị na ihuenyo na-egbochi anyị ịhụ "ihe mgbochi" na ihu ihu dum. N'ụzọ dị mma, site na ọkwa ọjọọ, anyị na-ahụ otu ọ si amalite n'ụzọ nke igwefoto dị n'ihu.
Ngwa ime ụlọ nke Wiko View 5 Plus
Anyị na-aga n'ihu ilele View 5 Plus, na anyị ga-eleba anya n'ime iji hụ ihe akwadebere ya iji mara ihe ọ nwere ike inye anyị. Ọzọkwa, anyị na-ahụ a processor arụpụtara site na MediaTek. N'okwu a, View 5 Plus na-aga n'ihu karịa ele 5, na ịkụ nzọ na mgbawa dị ike karịa Helio P35 MT6765.
Helio P35 enwewo ike nwee ntụkwasị obi nke Samsung maka Galaxy A12 na A21 ọhụrụ. Nbanye aha dị ka Xiaomi, Oppo, Motorola, LG ma ọ bụ Huawei na-ejikwa ihe nhazi a maka ọtụtụ ụdị ọhụrụ ha. Solvency na fluidity echekwa maka ngwaọrụ na-agba ọsọ flawlessly ye utom ekededi emi iyomde ndinam.
CPU mejupụtara CPU Octa isi na 4 Cortex A53 2.3 GHz cores na 4 Cortex A53 1.8 GHz cores na 64 Bit ije. Na GPU Ee ọ bụ otu ihe ahụ dị ka ele 5 mana ọ na-abịakwute vitamin nwere ebe nchekwa 4GB Ram na a ncheta n'ime nke 128 GB nke nwekwara ike ịgbasa site na Micro SD kaadị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ igwe dị ike na ọnụ ahịa dị mma, nweta Wiko View 5 Plus ugbu a na Amazon na ego.
Ngalaba foto nke Wiko View 5 Plus
Nke a bụ ngalaba na mmalite oge niile ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ site na mbido, anyị na-ahụkwa otu o si aga n'ihu na-akawanye mma na ngwaọrụ ọhụụ ọ bụla. Na nke a, na ịgbaso ntakịrị na ntụnyere dị n'etiti View 5 na View 5 Plus, anyị na-ahụ otu esi ahọrọ otu igwefoto igwefoto ahụ. Ha onwe ha nwekwara otu anya anọ na ọkụ ọkụ.
Ya mere, anyị na-ahụ ngalaba foto nke dị na ọkwa dị mma. Wiko na-aga n'ihu na-agbalite ma gbalịa imeziwanye na ngwaọrụ ọ bụla. Ihe akaebe nke a bụ igwefoto ya, otu n'ime ike nke ele 5 Plus. Anya 4 ya na-eme ka ahụmịhe foto ahụ na-enye afọ ojuju.
Ejiri Wiko View 5 nwere anya m ndị a:
Mmetụta maka Eserese mode na 2MP mkpebi.
Lensị obosara uzo na mkpebi 8MP.
Lensị nnukwu na 5MP mkpebi.
mmetụta OSkpụrụ CMOS na mkpebi 48MP, pikselụ nha 0,8.
Anyị na-ahụkwa na ihu a n'ihu igwefoto nwere 8 Mpx mkpebi. Foto ndị dị mma na oku vidiyo. Anyị hụrụ ụzọ Wiko chọrọ iji jikọta igwefoto n'ihu yana ọhụụ yiri oghere na ihuenyo ahụ.
Ọ bụrụ na i lee anya na foto ngwa nwere, anyị nwere ike igosipụta ụdị dị iche iche nke foto. Anyị nwere ewu ewu mmetụta bokeh, a na-akpọ "artur blur" nke na-enye ezigbo nsonaazụ. Ọ bụ ezie na anyị ga-ekwu nke ahụ ya na wuru ọkụ ọ na-ata ahụhụ nke ukwuu iji kọwaa ihe bụ isi na njigide na-emecha bụrụ ihe na-adịghị mma.
Na-adabere ọgụgụ isi ọ bụ mgbe ọ bụla na-enwe ọganihu mgbe ị na-eji igwefoto n'ihi na na-eme ndozi akpaka na mgbanwe ndị na - eme ka foto na vidiyo dị mma. Mana oge ụfọdụ nke a Rịba ama akwụsịlata nhazi nke foto.
Foto ndi nwere Wiko View 5 Plus
Ka ọ dị na mbụ, anyị na-etinye igwefoto smartphone na ule na ọrụ na-aga were ụfọdụ foto. Anyị enweela ike ịnwale modul igwefoto a na Wiko View 5 nke ha na-ekerịta ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'oge anyị na-azọrọ na anyị nọ n'ihu igwefoto dị mma. Ntụnyere na-abụ ihe jọgburu onwe ya, mana na-eche na anyị nọ n'etiti, foto ndị a nwetara dị ezigbo mma.
Ebe anyị na-ahụ a foto na a ezigbo eke ìhè. Dị ka 100% nke sensọ, ha na-enye mgbe niile ya kacha mma version na ọnọdụ nke ezi eke ìhè n'èzí. Nke a bụ ihe atụ nke ya. Siri ike ma kọwaa nke ọma, ezi mkpebi na ezi omimi.
N'ebe a, anyị na-anwa ịlele etu ihe mmetụta si akpa agwa ụdị textures na hues dị iche iche na-adị iche na nke ọma na ibe ha. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, ndị iche na-adị mfe ịghọta na el ọkwa zuru ezu dị ezigbo mma.
Na foto a, iji nwalee mbugharị site na igwefoto nke Wiko View 5 Plus anyị na-ahụ otú mbido mbụ si dị. Ọzọkwa, a edozi agba na ọkụ nke ọma.
Na ebe a na mbugharị na kacha, a hụrụ ka àgwà efuola ma achọpụtara ha, dị ka ọ bụ mgbagha, pikselụ dị nnọọ anya na oke mkpọtụ na-egosi. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere ike ịghọta ụdị ihe dị iche iche.
N'ikpeazụ, na njide a anyị nwekwara ike ịhụ etu na agba ndị ahụ dị ka ezi eziokwu dị ka o kwere mee. Textures, shapes, ụda na omimi na-ahụ kọwara nke ọma.
AUTONOMY (na mkpụrụedemede ukwu)
Anyị ekwuola na ngalaba igwefoto dị mkpa na ngwaọrụ a maka ihe niile ọ nwere ike inye anyị. Ma Batrị nke Wiko View 5 Plus, na karịa ihe niile nnwere onwe nke ahụ nwere ike inye anyị onyinye, kwesịrị ka a pụrụ iche aha. Anyị chọtara a 5.000 mAh batrị na-akwụ ụgwọ, nọmba dị elu karịa ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwaọrụ.
Mana ọ bụrụ na anyị elelee oge ụgwọ a, dị ka onye nrụpụta si enye anyị, ọ ga-ekwe omume na anyị na-eche ihu otu n’ime smartphones nwere ikike kacha mma nke ahịa na ya nso. Anyị ga-akwụ ụgwọ batrị nke View 5 Plus ugboro abụọ na izu niile. Na iji “nkịtị” eji ama nnwere onwe ha gbatịpụrụ ruo ụbọchị atọ na ọkara dị ịrịba ama na 100% ibu. Ga-echezọ ebe ị debere chaja ...
Echiche nke iji ekwentị eme ihe na-abụkarị okwu esemokwu. Onye ọrụ ọ bụla na-eji ekwentị ha nke ọma ma dị iche. Bụlagodi, anyị nwere ike ikwu na ọbụlagodi iji ojiji nke otu, Ochichi ya enweela nsogbu na-agafeghị ụbọchị abụọ zuru ezu.
Ihe isi ike nke anyị nwere ike itinye na batrị bụ na ọ adịghị nwere ngwa ngwa odori technology. Ma anyị nwere ike ibudata View 5 Plus enweghị nke ikuku na-akwụ ụgwọ ụkpụrụ. Iji mara mma, ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na Wiko View 5 Plus ọ naghị arụ ọrụ, Ọbụghị ncha ncha, a oké mobile, ọbụna ndị na-abụghị. Were na-achọ mkpanaka nwere nnwere onwe dị mma? Already nweela Wiko Nlele 5 Plus na Amazon nwere ego na mbupu n'efu.
Nkọwa, mgbakwunye na enweghị
Nchebe abụwo akụkụ dị mkpa ịtụle na gam akporo jiri ngwaọrụ gị niile. N'ihi nke a, anyị nwere dịkarịa ala, ohere nke igbochi anyị ngwaọrụ site na ọnụọgụ koodu ma ọ bụ akpọchi ụkpụrụ. Na mgbakwunye, dabere na onye nrụpụta, ohere ndị a na-abawanye.
Nlele 5 Plus na-etinye usoro nchekwa n'ụzọ abụọ dị iche iche ma dịkwa irè. Dị ka anyị hụrụ na nkọwa ahụ site n'akụkụ nke anụ ahụ akụkụ nke ekwentị, n’azụ bụ onye na-agụ mkpịsị aka. Ọ na-emi odude ke centrally na awade a irè na nnọọ ngwa ngwa akpọchi. Ke adianade do, Anam Udeme software, na-ewere uru nke n'ihu igwefoto, anyị nwere ike rụọ ọrụ akpọchi site ọdịdị ihu.
Ma enweghị akwụkwọ Dịka anyị nwere ike ịkọwapụta, nke mbụ batara na njikọ metụtara njikọta. Ma mba, Wiko View 5 Plus enweghị teknụzụ 5G. Ihe na ọ bụrụ na i lee ọnụahịa ọnụahịa ebe ọ dị abụghị ihe nzuzu. Maka ndị ọzọ, dịka anyị jikọtara, anyị na-atụ uche ngwa ngwa odori y ọ bụ ezie na n’obere nke, ndị Nchaji ikuku.
Nkọwapụta tebụl Wiko View 5 Plus
Nlereanya Lelee 5 Plus
Nhazi MediaTek Helio P35
CPU Octa-isi 2.3 GHz
Anya macro 5 Mpx
Mmetụta "Art blur" 2 Mpx
Ahịa 187.00 €
Linkzụta njikọ Wiko Nlele 5 Plus
Oge erugo ịgwa gị ihe kacha masị anyị nke Wiko View 5 Plus, na iji hụ ndị ahụ akụkụ ndị nwere ohere maka imeziwanye. Mana ọ dị mkpa iburu n'uche na anyị na-eche ihu na mkpanaka nke na-anọ n'okpuru 200 euro iji nwee ike ịkọwapụta banyere ntụpọ na ihe anyị chọrọ.
La nnwere onwe nke batrị ya na-enye ruo oge 3,5 na otu ụgwọ ọ dị n'ime iru ole na ole.
Nnukwu ya ihuenyo 6,55-anụ ọhịa na-enye ahụmahụ na-eju anya maka ka mma n'agbanyeghị enweghị mkpebi "elu".
La foto Ọ na-abịa stomping na Wiko a ma ọ na-egosi na onye nrụpụta a gbanwere iji nye ngwaahịa na-ebuwanye ibu.
La njikọta na-ekpuchi onyinyo na ngwa mara mma nke ọma n'akụkụ niile mana nke ahụ enweghị 5G.
Anyị achọpụtabeghịkwa Nchaji ikuku ni ibu ngwa ngwa. Anyị kwesịrị idozi maka ibu "nkịtị" ma nwee obere ndidi.
Wiko Ele 5 PLUS
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » WIKO VIEW 5 Plus: Nyocha, Nkọwapụta na Ahịa
Egwuregwu kachasị mma nke 6 maka gam akporo